कर्जा जोखिममा बैंकले ध्यान दिन जरुरी, कसरी गर्ने जोखिम न्यूनिकरण ? – Banking Khabar
कर्जा जोखिममा बैंकले ध्यान दिन जरुरी, कसरी गर्ने जोखिम न्यूनिकरण ?
बैंकिङ खबर ।कर्जा जोखिम भन्नाले कर्जा, सापटी लिने वा दिने कुनै एक पक्षले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेकोे कारण उत्पन्न हुने जोखिम भन्ने बुझ्नुपर्दछ । अर्थात, यो कर्जा लिने व्यक्ति,संस्था, ग्राहकले लिएको कर्जा, ऋिण वा सापट नतिरेको कारणले उत्पन्न हुने जोखिम नै कर्जा जोखिम हो ।
कर्जा अवधिभित्रको विभिन्न चरणहरुमा यस्तो जोखिम सिर्जना हुन सक्दछ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको मूख्य उद्देश्य जोखिमको न्युनिकरण गर्नका साथै कर्जा जोखिमलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र कायम राखि बैंकको जोखिम समायोजित प्रतिफल दरलाई अधिकतममा पुर्याउनु हो ।
कर्जा व्यवस्थापनका उपाय
कारोबारको शिलशिलामा कर्जा जोखिमलाई मुल्यांकन गर्न कर्जा मापनले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । त्यस्तै, कर्जा प्रभाव विश्लेषणको माध्यमबाट पनि कर्जा जोखिमलाई अतिकेन्द्रित हुनबाट बचाउँछ । कर्जा मुल्यांकनको माध्यमबाट मापन गर्ने, कर्जा नोक्सानीको परिमाणको अनुमान गर्ने, वैज्ञानिक तवरले व्याजदर निर्धारण गर्ने तथा प्रभावकारी कर्जा विश्लेषण एवम् उचित प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरल हुन्छ ।